Tonizia: Misara-kevitra amin’ny fitsidihan’i Qaradawi · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Jona 2018 11:55 GMT
(Lahatsoratra teny anglisy nivoaka tamin'ny marsa 2009)
Raha misy ireo falifaly, mitehaka ny fitsidihana sady nanangana vondrona Facebook hanehoany ny hafaliany sy ny haravoany, ny hafa kosa nanangana vondrona hanaovana hetsi-panoherana sy hitsipahana ny fitsidihana.
Ny fitsidihana ofisialin'i Qaradawi tao Tonizia tamin'ny 4-5 marsa dia ny hankalazana an'i Kairouan aho renivohitry ny kolontsaina Islamika. Izao fitsidihana izao ny voalohany tamin'ny fomba ofisialy tao Tonizia taoriany ny niampangany ny governemanta toniziana ho mandrafy ny Islam sy ny Miozolomana. Nampangainy ihany koa i Sghaier Awled Ahmed, poety toniziana ho tsy mahatoky raha ny hita ao amin'ny bokiny: Ekstremisma laika ao amin'ny Islam: Ny Ohatra amin'i Tonizia sy i Torkia, izay nivoaka tamin'ny taona 2001.
Ny mpanohana ny fitsidihana mahita izao fitsidihana ofisialy izao ho fiovana eo amin'ny politikan'ny governemanta manoloana ny Islam sy ny Islamisma ary mariky ny tsy fahombiazan'ny tetikasa laika ao Tonizia. Rashed Ghannuchi filohan'ny hetsika islamika Annahdha (voarara tamin'izany fotoana izany) nizara ny hafaliany tamin'izao fitsidihana izao ary niantso ny manampahefana toniziana izy hanafoana ny didy hitsivolana mandrara ny hijab (folara islamika isaloran'ny vehivavy), tao amin'ny fanambaràna an-gazety navoakany avy any Londra.
Ireo mpanohitra ny fitsidihana kosa, etsy ankilan'izany, nilaza fa efa namely ny Toniziana sy i Tonizia tao amin'ny boky efa voatonona etsy ambony i Qaradawi. Hitan'ireo mpanohitra ny fitsidihana ireto fa fikafikan'ny governemanta toniziana indray izao hahazoana fanohanana mandritra ny fifidianana, indrindra moa fa natombok'i Qaradawi tamin'ny fandehanana mankany amin'ny radio Zaitouna, naorin'ny vinantolahin'ny filoha toniziana Sakhr Materi, izay eo am-panorenana banky islamika ao Tonizia ihany koa, izao fitsidihana tamin'ny fomba ofisialy izao. Hitan-dry zareo fa fanohanana ireo fanombohan'andraikitra ireo izao fitsidihana izao, indrindra fa malaza sy ankamamian'ny Toniziana i Qaradawi. Fanampin'izany, hitan-dry zareo ho fandrahonana ny tontolo laika manjaka ao Tonizia hatramin'ny fitondran'ny filoha voalohany izao fitsidihana izao.
Tunisian Debate naneho ny heviny tamin'ny alalan'ny sariitatra araka ny mahazavatra azy:
Mety ho tsy nisy nahamarika ny fitsidihan'ny Imam Qardhawi raha tsy nandray endrika ofisialy. Hita tokoa fa niteraka adihevitra mafana dia mafana ny karipetra mena navelatry ny minisitry ny kolontsaina sy ny lohateny lehibe nanokanan'ny famoaham-baovao azy. Hitan'ny bilaogera laika izao ho fandrahonana ny fandrosoana azo tamin'i Bourguiba [Filohan'i Tonizia teo aloha] raha mihiaka ho fiverenan'i Tonizia amin'ny laoniny ny mpandala ny nentin-drazana, izay taitra ihany niala tamin'ny tsy fihetsehana laika “vita tandrefana”. Ny resaky ny samy marenina no nandrendrika izay mety ho fanantenana isian'ny fihavanana eo amin'ny laika sy ny Islam.
Noresahany ihany koa ny tetika ambadika ataon'ny manampahefana amin'izao fanasana amin'ny fomba ofisialy izao:
Amin'izao fampifangaroana izao ny governemanta mikojakoja ny fisarahana ary manakana ny olom-pirenena tsy hifanakalo hevitra mazava amin'ny fahasamihafan-kevitra. Teti-panorony ny mividy fitoniana ara-tsosialy amin'ny fampiasana ireo feo manivaka rehetra. Hahazoany tombony ireny dia ho arantirantiny ao anatin'ny demaokrasia sarintsariny.
Syria 10 ora izay